Call_Oromo – Welcome United
Sochii falama mirga walqixxummaa qooddii, sanyummaa fi dirqiin biyyaarraa ariyatamuu irratti geggeeffamu.
Waamicha balaalefannaa gocha farra sanyummaa Hamburg, Fulbaana 29, 2018
Falma gocha sanyummaa
Falma Dhugaaf Geggeefamu
Waanti nutti himamuu hundi oduu sobaafi jibba irra madde waan tahgeef fudhachuuf kan ulfaatudha. Osoo baqattoonni guyya guyyaan galanaan nyaatamanii, namoonnii gocha sanyummaa kana leellisan rakkoo hunda baqataan wal qabsiisuun baqattoota lubbuun hafanii dhufan biyyi keenya baqataa kanaa ol hin fudhattu yaada jedhuun Poaarlaamaa biyyattii fi karaa gubbaatti bahuun gochaafi jechoota sanyummaa mullissu fayyadamu. Biyya keenya irratti baayyinni baqattoota kun baasii humnaan olii fideera yaada jedhuun baqatytoonni Qooqa akka hiun baranne dhorkanii jiru. Kana malees Daa“imannif Dubartoota dabalatee siree ciisichaa fi manneen barnootaa irraa humnaan qabamanii dirqamaan biyyota isaan hin beeknetti darbatamaa jiru. Baqatummaan kanneen sababan kan akka Waraana, beela, fii qaalahinsa jireenyaa jala lubbuu baraarfachuuf dheesinee dhufnus waanti asitti nurratti taha jiru haalaan yaadessadha.
Jireenya hawaasaa irraa dhiibamnee moggaatti baanera. Haalli Siyaas-diinagde adunyaan yeroo ammaa keessa jirtu biyyaa akka godaannu nugochuu irra darbee maatiif firoottan keenya irraas addan nukutee jira. Mootummaan Kaampitti nugalchuu daangaa isaa cufatee jira. Mirgi namummaa keenyas akka nurraa burraa sarbamu hin feenu. Kun ammo haaluma adeemsa dimokraasiti. Miidhaafi balaa kana kan nurraan gahaa jiru Doonii galaana Meditiraaniyaani qofa osoo hin taane ilaalacha sanyummaa guutuu Awurooppaa keessatti mullataa jirudha.
Kuni Gocha sanyummaati!
Bara 2017 keessa osoo galaana irra gara Awurooppaa galuuf yaalanii namoonni 3,00 ol du“aatifii achi buuteen isaanii dhabamee jira. Midayaan waan kana gabaases hin jiru. Baruma kana keessa biyya Jarman keessattis haleellaan 2,00 tahu Kaampii baqatootaa irratti kan raawwate yoo tahu. Gargaartoota baqatootaa irrattis haleellaan 180 raawwatameera. Dhaabbilee amantaa Musliimaa fi hordoftoota amantichaa irrattis al 950, duula jibbiinsa warra Semetik irratti al 1,453 haleellaan raawwateera.
Filannoo biyyoolessaa biyya Jarman kan bara darbee irratti lammileen 5.5 mili. Tahan paartii gocha sanyummaa faarsu kan AfD kedhamu filatanii jiru. Gochi suukanneessafii duguuggaan sanyii bara mootummaa abbaa hirree biyya kanaan raawwatame waan dagatamu miti.
Dugaa dubbachuuf yoo tahe, eenyutu bakkaa qubannaa isaatti ulaan itti reebamaa, Biiroo dhimma baqataatti mirga isaa sarbamaa jiras, hojiin seeraan ala tahee hojjiisamee kafaltii geggeefamaa jira? Eenyutu mana fincaani fi qe“ee qulqulleessaa jira? Eenyutu waggaa 10 ol taahee harras akka keessummaatti ilaalamaa jira? Hatahu malee Partiin AfD kun paarlmaa biyyattii keessatti teessoo 13% jechuun nuuf dhumaatii adunyaa miti. Didneerra!
Dhugaan jirtu walii addadha
Falmachuuf kaanerra, falmiin kewenya dhaabbii hinqabu. Gocha sanyummaa, jeequmsa adunyaa, biyya gara laafina hin qabne fi uummata mooggaatti gatame kanaaf nii falmina. Nuti addaan hin baanu akka addaan nubaasanis hin ayyamnu.Lammii biyyanaas tahe lammii biyya kaani, baqataas tahee „Saxon“ yeroo dheeraaf rakkoo tahaa hin turre. Ofuma keenya irraa kahuun adunyaa haarawwaa ha ijaarru. Eegalleerras, kutaa Adunyaa kamirraayyu hadhufnu teessoo walii qabnaulaan keenyas banaadha.Ogeessaafi michuu waliif taaneerra. Tokkummaan keenya hojii hojjennuuf humna nuuf tahee jira.bakka barbaachisne hundatti nii argamna.
Sagantaan bara 2017“welcome united“ jedhuun magaalaa Barliin irratti qophisine bu“a qabeessa ture. Waa“ee mirga keenyaaf sagalee dhageessisuun falmanneerra. Sochii hunda galeessa tahe taasisuun Magaaloota ollaa, hiriyoota fagoof dhihoo waliin tahuun cimina keenya mullisneerra. Ammaan booda sodaan, kophummaaf gabrummaan hin jiru.
Kanaaf jenneeti sagantaa keenya fulduraa kan Hamburg irratti geggeefamu kana tokko taanee gocha sanyummaa irratti qabsoo keenya finiinsina. Yeroo gaarii nuuf taha jennees abdanna. Heeddumina qabna, hamma yaadnuun olittis humna qabna!
Fulbaana 29, magaala Hamburg irratti hiriira biyyoolessaa irratti akka argamtan asumaan waamicha isinii goona.
Kottaa nu waliin hiriiraa!